ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်နွယ်မှု၏ Sense သည် Making
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 31 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ချိန်းတွေ့တိုင်းနီးပါးသည်လူတစ်ဦးတယောက်သည်အချိန်သို့မဟုတ်အခြားမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမှအနည်းဆုံးအချို့သဘောမျိုးနဲ့ချဉ်းကပ်သောသူတို့ကိုအမှုအရာတို့ကိုတစ်ဦးဖြစ်သည်. နောက်ဆုံးတော့, ဆက်ဆံရေးကိုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အရှုပ်ထွေးသည်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကအခြားလူတစ်ဦးကယ့်ကိုရှာဖွေနေကြောင်းသည်အဘယ်အရာကိုထုတ်တွက်ဆဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်. သူတို့ကိုယ်သူတို့ဆက်ဆံရေးကိုအတွက်ရုန်းကန်နေရှာတွေ့သောလူများသည်မကြာခဏပိုမိုရက်စွဲများသွားသူတို့ကို ပို. ရွေးချယ်စရာများပေးမည်ခံစားရတယ်, မိမိတို့တိုးမြှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ် ပို. ပင်ရှုပ်ထွေးသည့်အရေးကိစ္စများနှင့်အတူရုန်းကန်နေရှာတွေ့မှသာ.
အဲဒီလိုဖြစ်လာကြောင်း၏အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်, လူတစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်စွမ်းနိုင်ခြင်းမှသည်. သတငျးကောငျးကသေချာပေါက်ဒီခက်ခဲဖြစ်နေစရာမလိုပေကြောင်း.
ချိန်းတွေ့ထဲကကြောက်လနှင့်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ယူနည်းလမ်းတစ်ခုအစအဦး၌ပုံစံမျိုးအရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်. ကအတိအကျကြောင်းကြောင့်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲနှင့် ပတ်သက်. ကြောက်မက်ဘွယ်သောအခြင်းသို့မဟုတ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ. အမှုအရာကောင်းကောင်းမသွားလျှင်ဒုတိယရက်စွဲရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါဘူး. တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအဲဒီလူအကြောင်းကိုပိုမိုထွက်ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့အလှည့်တွင်နောက်ထပ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူတစ်ဦးပွင့်လင်းရိုးသားစကားလက်ဆုံရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ကိုကြည့်ရှုရပါမည်, တဦးချင်းအသင်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြု.
လူတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲသွားထက် ပတ်သက်. ပိုမိုထွက်အလေးအနက်ထားဟန်ပေါက်တစ်ခုတည်းသောအရာကပထမဦးဆုံးနေ့စွဲလာပြီဖြစ်ပါတယ်. အချို့လူများကနေ့စွဲရက်စွဲပြီးနောက်လာပြီသမျှသောစကားတို့ကိုအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်ကြပုံရသည်. အခြားသူများကအလွန်အခက်တွေ့. ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးချဖို့ဒါမှမဟုတ်လူရက်စွဲတစ်ခုရှာတွေ့ကူညီပေးနေမျက်နှာသို့အားထုတ်ဖြစ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အထောက်အကူပြုပေမည်. အခြားတစ်ဦးချင်းစီသေချာပေါက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတို့တစ်တွေပိုပြီးရိုးရာဖက်ရှင်အတွက်ရက်စွဲတစ်ခုရလိမ့်မည်ဟုသေချာစေရန် prearranged နှင့်ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေခဲ့ကြကြောင်းရက်စွဲများနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်. ယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်ထွက်ကိုမေးမြန်းဖို့အကြီးမြတ်ဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမတစ်ဦးကိုခွေးပန်းခြံမှာဖြစ်ပါတယ်.
ရေခဲဖောက်ဖျက်တဲ့ခွေးကိုပိုင်ဆိုင် ပတ်သက်. တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ. အချို့အခြားအရာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ထက်ဒါဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လောက်တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန် ပို. လွယ်ကူသည်. သင်ဖွယ်ရှိသင်အခြားသောအခြေအနေမျိုး၌ဖြစ်ခဲ့ဖူးမှာအားလုံးဘာမှမပြောခဲ့ကြမလိုက်သောအခါ၎င်းသည်သင့်အားသင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အားတစ်ခုခုပြောဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏. ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသောအခါ, ဒါကြောင့်ခွေးပန်းခြံတစ်စုံတစ်ဦးမှဆွဲဆောင်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောရေပန်းစားနေရာဖြစ်သည်ကိုမအံ့ဩဘွယ်ဖြစ်၏. ဒါဟာသင့်အကြောင်းပြောဆိုရန်အရာတစ်ခုခုပေးသည်နှင့်သင်အဲဒီမှာသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ရှိကြောင်းတစ်ဦးချင်းအားဖြင့်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်ကိုထုတ်ဟုမေးမြန်းခံရပါကသင်တို့၏နှစ်ခုပြီးသားဘုံတွင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အရာရှိသည်ကိုသိရ.
အဆိုပါအချက်ချိန်းတွေ့သင့်ရဲ့စတိုင်နောက်ဆုံးမှာသင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သင်ယေဘုယျအားဖြင့်မှုအရာတို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လမ်းချည်ထားကြလိမ့်မည် ဟူ. ဖြစ်သည်. ဒါကကိုသင်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲရရန်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကူညီပေးပါမည်. အဲဒီမှာရပြီးတာနဲ့, သင်တို့ကိုယူစေခြင်းငှါလေရာရာ၌မှတ်မိဖို့အရေးကြီးဆုံးအရာစကားပြောခန်းကိုအလင်းစောင့်ရှောက်ပြီးသင်ယူခွင့်ပြုပါရန်ဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်ကိုယ့်အဆုံးမှာသင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုလူတစ်ဦးဖြစ်စေခြင်းငှါကြောင့်,.